Ogaden News Agency (ONA) – Madaxweynaha Cusub ee Zimbabwe oo Awoodda La Wareegay.
Madaxweynaha Cusub ee Zimbabwe oo Awoodda La Wareegay.
Posted by Dayr	/ November 25, 2017
Madaxweynaha cusub ee Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa ayaa khudbad ka jeediyay garoon ciyaareed oo ay dad soo buuxdhaafiyeen, wuxuuna wacad ku maray in uu u shaqayn doono dhammaan muwaadiniinta Zimbabwe.
Wuxuu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu jagadan qabto. Wuxuu ammaan kala dul dhacay madaxweynihii uu badalay Robert Mugabe, isaga oo ugu yeedhay, Aabo, ababiye, nin ay ciidammada ka soo wada shaqeeyeen iyo hogaamiye, dadkii ayaana aad ugu sacabeeyay.
Mugabe ayaa si layaab leh xafiiska u banneeyay ka dib 37 sano oo uu xukun kaligitalisnimo ah dadka ku maamulayay. Xil katagitaankiisunu wuxuu dabo socday awood isku qabqabsasho horseeday in Mnangagwa laga eryo madaxweyne ku xigeennimadii, si wadada loogu xaadho in Grace Mugabe oo ah xaaska Mugabe ay xilka la wareegto.
Xil ka qaadistiisii bishii hore ayaa ku kaliftay in xisbiga ZANU-PF iyo ciidammada ay awooda la wareegaan, Mugabe-na ku qasbaan in uu xilka ka dego. Mucaaradka ayaa ka codsaday Mnangagwa in uu soo afjaro dhaqanka musuqmaasuqa ee dalkaas.
Waxaa jira warar ka hadlaya in Mugabe loo fidiyay xasaanad uu kaga nabad galayo in wax dacwad ah lagu soo oogo. Lama filanayo in uu kasoo qeybgalo caleemo-saarka Mnangagwa sida uu kusoo waramayo wariyaha BBC-da Andrew Harding. Balse xaqiiqda ah in uusan kasoo qeybgalaynin ayaa waxa ay muujinaysaa in isbadalka dhacaya uusan ahayn mid fudud.
Mnangagwa ayaa balanqaaday shaqo abuur xili heerka shaqo la’aanta Zimbabwe ay gaarayso boqolkiiba 90%. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa Zimbabwe ugu baaqday in ay la timaado isbadal degdeg ah, islamarkaasna hesho deymo. Lama oga in uu dowlad wadaag ah soo dhisi doono ama xisbiga Zanu-PF oo kaliya uu golihiisa wasiirada ka koobi doono inta uu xilka hayo ka hor doorashooyinka sannadka dambe.